Neodymium Magnet, Samarium ayibe Magnet, Motor Magnet-Horizon
I-Ningbo Horizon Magnetic Technologies Co, Ltd ngumvelisi othe nkqo ngokuthe nkqo womhlaba onqabileyo womazibuthe we-Neodymium kunye neendibano ezinxulumene noko. Ngombulelo kubuchule bethu obungenakuthelekiswa nanto kunye namava atyebileyo kwicandelo lomazibuthe, sinokubonelela abathengi ngohlobo olubanzi lweemveliso zemagnethi ukusuka kwiiprototypes ukuya kwimveliso yobuninzi, kunye nokunceda abathengi bafezekise izisombululo ezifanelekileyo.
Ukuloba kumacala amabini ...
RoHS kunye REACH Ukuthobela
Imagnethi yeNeodymium isetyenziswa ngokubanzi kwizixhobo zombane neze-elektroniki, kwanakwiimveliso zabathengi okanye kwizinto zokudlala zabantwana, ke ngoko sithatha amanyathelo okulawula nokuqinisekisa ukuba iimveliso zethu zemagneti ziyahambelana neRoHS kunye ne-REACH.
Umgangatho wokuqala kwiXabiso loKhuphiswano
Ngokusekwe kumgangatho wokuqala wefilosofi, sihlala sisebenzisa inkqubo yoyilo kunye nemveliso, kunye nolawulo ukuphucula iindleko zabathengi. Siqinisekile ukuba kumgangatho ofanayo ixabiso lethu likhuphisana ngakumbi kunabo sikhuphisana nabo.
Isikali seshishini esiphakathi senza ukuba ulungelelwaniso olukhawulezayo phakathi kwamasebe ahambelana noko kunye nokuphendula kubathengi. Ubuchule bokuyila ngaphakathi ngaphakathi kunye ne-inventri ebanzi yeendibano zemagnethi esemgangathweni iqinisekisa ukuhanjiswa kwexesha elifanelekileyo.
Umhlaba oqhelekileyo oomazibuthe beNeodymium kunye neendibano ezinxulumene neNeodymium zemagnethi ziveliswa ngaphakathi endlwini. Ubungcali bethu bemagnethi busenza sikwazi ukuvelisa ezinye iimveliso zemagnethi ezinzima kubathengi ukuba bathenge indawo enye ngokulula.
qhubeka kunye neendaba zamva nje kwaye ubonise amanqaku malunga neemagnethi
NdFeB kunye SmCo iimagnethi Isetyenziswa Pump Magnetic
I-NdFeB eyomeleleyo kunye neemagnethi zeSmCo zinokuvelisa amandla okuqhuba ezinye izinto ngaphandle konxibelelwano oluthe ngqo, izicelo ezininzi zisebenzisa eli nqaku, ngokufana nokuhlangana kwemagnethi kunye neempompo ezidityaniswe ngombane kwizicelo ezingaphantsi. Yemiqadi yokuhlanganisa Magnetic drive zinika non-contact tr ...
Isetyhula ye5G kunye neIsolator SmCo Magnet
I-5G, itekhnoloji yesizukulwane sesihlanu setekhnoloji yoqhakamshelwano lweselfowuni sisizukulwane esitsha setekhnoloji yonxibelelwano yeselfowuni eneempawu zesantya esiphezulu, ukulibaziseka okuphantsi kunye nonxibelelwano olukhulu. Sisiseko sothungelwano ukuqonda umatshini womntu kunye nokunxibelelana kwento. I-Intanethi o ...
Icandelo lemveliso yemagnethi esisigxina lase China lidlala indima ebalulekileyo emhlabeni. Akukho kuphela amashishini abandakanyeka kwimveliso nakwisicelo, kodwa nomsebenzi wophando ubukwisonyuka. Izinto ezisisigxina zemagnethi zahlulwe ubukhulu becala kunqabileyo yomhlaba, isinyithi esisigxina ...